ရဲရဲ ပေါ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရဲရဲ ပေါ့
Posted by phone_kyaw on Feb 5, 2013 in Copy/Paste | 8 comments
Tawwat is now friends with Sang Tuyen and 19 other people.
Tawwat followed Nay Wai.
55 minutes ago near Perth, Western Australia
နိုင်ငံရေးသမားတွေက ၀န်ကြီးတွေရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု့ ကို လူသိအောင် ထုတ်ပြန်ဖို့ တောင်းဆိုကြတယ်။
လွှတ်တော်မှာမဲခွဲတော့ ဒီအဆိုရှုံးတယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေက ဘာမှမပိုင်တော့ သူတို့ က ကိုယ့်မှာရှိတာကိုပြောရဲတာပေါ့ဗျာ။
ရှိတဲ့ဝန်ကြီးတွေက ဘယ်ပြောရဲပါ့မလဲ။ တော်ကြာနေ ဒါးမြလာတိုက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ဘာမရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကို ဘယ်ဒမြကမှ တိုက်ဖို့ စိတ်မ၀င်စားပါ။
ခေတ်က ကိုယ်မှာရှိတာကို ထုတ်ပြောဖို့ ကြွားဖို့ ကောင်းတဲ့ခေတ်မဟုတ်တာကို ခင်ဗျားတို့ လည်း သိသိကြီးနဲ့ ။
Kyaw Hlaingwin and Nyi Nyi Lwin like this.
Mahabodhi Temple Western Australia
about an hour ago near Perth, Western Australia
တလောက ပညာရေး ရံပုံငွေပွဲတွေလုပ်တယ်။ ဆွယ်တာ အကျီကိုလေလံတင်တယ်။ ပန်ချီလေးတစ်ချပ်ကို သိန်းထောင်ချီရတယ်။ အန်အယ်ဒီလည်း လုပ်သလို၊ ၈၈ မျိုးဆက်တွေလည်း လုပ်တယ်။ နောက်ပြီး အလှူရှင်တွေကလည်း လှူတယ်။ ပညာရေးရံပုံငွေရတယ်။ နာမည်ကတော့ ပညာရေး ရံပုံငွေဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တပ်တယ်။
ဟိုလူ့ ကိုနဲနဲ၊ ဒီအဖွဲ့ ကိုနဲနဲ ပြန်ပြီးဖြန့် ပေးတယ်။ ကျန်တာကို အဖွဲ့ ဝင်တွေနဲ့ အဖွဲ့ ဝင်မိသားစုတွေအတွက်သုံးတယ်။
ဒီမှာနားမလည်ဖြစ်တာက မြို့ နယ်တိုင်းက အန်အယ်ဒီရုံးတွေနဲ့ ၈၈ အဖွဲ့ တွေဟာ အားလုံး စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ရုံးတွေပဲ။
ရလာတဲ့ရံပုံငွေကို ကိုယ့်ပါတီအတွက် မသုံးပဲ ဘယ်လိုဖြစ်လိုများ တတိုင်းပြည်လုံးကို ကယ်တင်ချင်တဲ့ အတွေးမျိုးတွေနဲ့ လုပ်ကြတာလဲမသိဘူး။
နိုင်ငံရေးပါတီတခုဟာ ရံပုံငွေရှိမှ မဲဆွယ်ရေးနဲ့ ပါတီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်မှာပေါ့။ ရံပုံငွေရှာရင်လည်း မျောက်ပြဆန်တောင်းတဲ့ရံပုံငွေရှာနည်မျိူး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးပါတီတွေမလုပ်ကြပါဘူး။
အခု ကျနောတို့ တိုင်းပြည်က လုပ်လည်း လုပ်ချင်သေးတယ်။ မရဲတရဲ။ ဖြစ်သင့်တာက ပါတီအတွက် ရံပုံငွေကို ရှာပြီး ပါတီအတွက်ပဲ သုံးသင့်တာပေါ့။ အခုတော့ အန်ဂျီအိုလိုလို၊ ဘုရားတည်ဖို့ အလှူခံသလိုလို ပါတီရံပုံငွေလိုလိုလုပ်ပြီး မရိုးမသားမဲဆွယ်နေသလိုဖြစ်နေလားလို့ ။
ဒါ့ကြောင့် မရောင်ရာ ဆီလူးတယ်။ အလှူ လက်ဖတ်နဲ့ မျက်နာလုပ်တဲ့ လူတွေဖြစ်နေပြီ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ပါတီရံပုံငွေ၊ အဖွဲ့ အစည်းရဲ့ ရံပုံငွေအတွက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစတဲ့အမည်တွေမခံပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လုပ်ကြရင်ကောင်းမယ်။
ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့ ပိုစ့်တွေကို ဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် မမန့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျ။
အခုပိုစ့်တော့ အရေးကြိုက်သမို့ နည်းနည်းမန့်မယ်ဗျာ။
၀န်ကြီးတွေက သူတို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု့ကို မပြောရဲကြတာ သမ္မာအာဇီဝနဲ့ ရှာဖွေစုဆောင်းထားတာမဟုတ်ဘဲ
သမ ၀ါးယမ နဲ့ စုဆောင်းထားတွေ ဖြစ်လို့ပေါ့ဗျာ။
ပါတီအင်အားရှိအောင် ရံပုံငွေစုရမှာက ပါတီတိုင်းလုပ်သင့်တာ မှန်တယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာဆိုတာ ကလည်း အကြွားလေးလုပ် လူထင်ကြီး အဟီးဟီး လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကလည်း အခံက ရှိသကိုးဗျ။
Carry On ပါဗျာ။
လေ့လာသွားပါတယ် ကိုဘဖုန်းကျော်ရေ………………
ရွှေမိုင်းမှာ ရှောဘရားသားဖြစ်သွားပြီ မှတ်နေတာ
အခုလို ရေးချင်ရာရေး ပြောချင်တာပြော
လက်ဂျောမတင်းတဲ့ အလုပ်ကို ပြန်လုပ်တဲ့ အတွက်
ဝမ်းလဲမသာ ဝမ်းလဲမနဲ ပါဟု
ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေအရ NLD က သံမဒဖြစ်မှာမို့လား
သံမဒလားဘာလားမသိ အချို့နေရာတွေမှာ သူတို့က ဦးဆောင်လုပ်မှ ရသလိုလိုဘာလိုလို
ဘက်ပြောင်းသွားတဲ့ စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတစ်ယောက်စွဲစိခံရတဲ့ ရုပ်သံသတင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၂၀၁၅ မှာသမ္မတမဖြစ်နိုင်ပါဘူး..။
သေချာကြောင်း.. ပြည်ခိုင်ဖြိုး(အာဏာရပါတီ)က.. ဒုသမ္မတရွေးတာမှာ.. ထင်းကနဲ့မြင်သာအောင်ပြထားတယ်..
အာဏာရအောင်ရည်ရွယ်ချက်..စူးစူးထားလုပ်တဲ့.. နိုင်ငံရေး(ပြတ်ပြတ်သားသား) လုပ်သင့်ကြပါကြောင်း..။ :harr:
ပါတီရံပုံငွေ..နိုင်ငံခြားကယူရင်.. တချိန်ချိန်မှာ.. မဟာပြဿနာတက်မှာဖြစ်ကြောင်း..
While questions regarding the U.S. Democratic Party’s fund-raising activities first arose overaLos Angeles Times article published on September 21, 1996, China’s alleged role in the affair first gained public attention when Bob Woodward and Brian Duffy of The Washington Post publishedastory stating thataUnited States Department of Justice investigation into the fund-raising activities had uncovered evidence that agents of China sought to direct contributions from foreign sources to the Democratic National Committee (DNC) before the 1996 presidential campaign. The journalists wrote that intelligence information had shown the Chinese Embassy in Washington, D.C. was used for coordinating contributions to the DNC in violation of United States law forbidding non-American citizens or non-permanent residents from giving monetary donations to United States politicians and political parties. A Republican investigator of the controversy stated the Chinese plan targeted both presidential and congressional United States elections, while Democratic Senators said the evidence showed the Chinese targeted only congressional elections. The Chinese government denied all accusations.